Amapulazi amazambane esifundeni saseNovosibirsk - umagazini "wePatato System"
UMikhail Tremasov, omele isifunda weSifunda SaseSiberia Federal kanye neFar East, LLC "GRIMME-RUS"
Ngaphandle kwezimo zezulu ezinzima, ukukhiqizwa kwezitshalo kuthuthukiswa impela esifundeni saseNovosibirsk. Izindawo eziyinhloko esifundeni zabelwe ukukhiqizwa kwezitshalo zokusanhlamvu, kepha amazambane nawo athola indawo yawo.
Leli siko litshalwa kuwo wonke amagceke asemakhaya. Bangaphezu kweshumi nambili amabhizinisi ezolimo abandakanyeka ekukhiqizeni izimboni zamazambane. Ukuphumelela kwemiphumela ephezulu kwenziwa lula ukusetshenziswa kobuchwepheshe obuthuthukisiwe nemishini yesimanje enikezwe ngabakhiqizi basekhaya kanye nabalingani bangaphandle abavela emazweni aseYurophu naseMelika.
Kumele kuqashelwe ukuthi eminyakeni emibili edlule isimo semakethe besilokhu singekho esimeni esihle kubakhiqizi bamazambane. Amanani emikhiqizo aphansi kakhulu, izindleko zokugcina ziyakhula, futhi isiteshi sokusabalalisa sendabuko kumaRiphabhuliki aseCentral Asia cishe asisebenzi. Ngalesi sizinda, amabhizinisi amaningi ezolimo aqala ukunciphisa indawo yokulima, noma avale ngokuphelele ukukhiqizwa.
Abokuqala ukushaywa kwakungamapulazi amancane, kanye nalawo ayenolwazi oluthile oluncane. Kwanele ukusho ukuthi kulo nyaka amazambane awazange atshalwe kuze kube muva nje yipulazi elikhulu lamazambane esifundeni - JSC "Yemelyanovskiy"kutshalwa amahektha angaphezu kwama-500.
Kunzima ukukhuluma ngamathemba: umthamo omkhulu wamazambane akhiqizwe esifundeni unekhwalithi ephansi (umphumela wokungagcinwa kwamasu wezolimo, ukusetshenziswa kwemishini ephelelwe yisikhathi engahlangabezani nezidingo zesimanje).
Amaphesenti amancane wokukhishwa atholwa ukucutshungulwa, nakho okunganikeli ekukhuleni kwamanani womkhiqizo. Kepha abakhiqizi bezolimo babeka amathemba abo ekufikeni kwePepsiCo esifundeni saseNovosibirsk.
NgoFebhuwari 15, 2019 eSochi, ngesikhathi seRussia Investment Forum, uMbusi weSifunda saseNovosibirsk u-Andrey Travnikov kanye noMongameli wePepsiCo eRussia, eBelarus, e-Ukraine, eCaucasus naseCentral Asia, uNeil Starrock, basayine isivumelwano ngokwakhiwa kwesitshalo sokudla okulula eNovosibirsk.
Umsebenzi omusha uzokhiqiza ama-chips anegama lama-Lays. Sikhuluma ngokucubungula amathani ayizigidi ezingama-250300 amazambane, okuthi, ngokombono wabakhiqizi bezolimo basendaweni, kungathinta kakhulu umnotho wamabhizinisi abo, ukuthuthukiswa okuqhubekayo kobuchwepheshe bamapulazi futhi, mhlawumbe, kubuyisele labo asebeke phansi ukukhiqizwa kwamazambane embonini.
Namuhla, ipulazi elingu-1 lokukhiqiza amazambane esifundeni saseNovosibirsk lingabizwa ngokufanele I-SPH "Yarkovskoe". Ukuma okuzinzile komnotho kuqinisekiswa ngumsebenzi ohlelwe kahle wethimba lonke, oholwa umphathi webhizinisi onethalente uGleb Alexandrovich Popovtsev.
I- "Yarkovskoye" inamahektha ayi-10 wezindawo ezihlwanyelwe, lapho amahektha angama-000 abelwe amazambane. Izindlela zokulima ezithuthukisiwe nokusetshenziswa kobuchwepheshe besimanje kukuvumela ukuthi uthole isivuno esinothile nesisezingeni eliphezulu. Amazambane agcinwa endaweni yokugcina esanda kwakhiwa efakwe ubuchwepheshe bamuva, futhi izindleko zonyaka zemishini yezolimo nemishini enanini lamashumi ezigidi zama-ruble epulazini zibizwa ngokuthi yimali esikhathini esizayo sebhizinisi.
Ngokusho komqondisi omkhulu wepulazi, uVladimir Robertovich Koenig, i-SPH “Yarkovskoye” nayo yandisa ukukhiqizwa kwemifino - izaqathe, u-anyanisi kanye neklabishi, ngoba abantu abasebenza ebhizinisini bayayazi indlela yokutshala imikhiqizo esezingeni eliphakeme efunwayo emakethe.
Indawo ebalulekile ekukhiqizeni imifino esifundeni saseNovosibirsk yi I-LLC "OPKH" DARY ORDYNSKA "lapho kulinywa khona amazambane, izaqathe kanye nama-beet endaweni engamahektha angama-300. Inhloko yebhizinisi, uShakir Suleymanov, ungumuntu ovulekile, omuhle kakhulu futhi othanda ukungenisa izihambi. Imikhiqizo yaleli bhizinisi ingahlala itholakala emashalofini ezitolo zezitolo zaseNovosibirsk.
Elinye ipulazi elikhulisa imifino lisondele kakhulu edolobhaneni lesayensi laseKoltsovo - I-LLC "Izingadi zeGiant". Sekuyisikhathi eside iholwa ngu-Elena Nikolaevna Polupanova. Okukhethekile kwebhizinisi ukukhiqizwa kwemifino ebamba ukushisa, kepha ipulazi libuye lilime amazambane (endaweni eyi-130 ha) futhi likhule izaqathe (ama-40 ha). Imikhiqizo inikezwa kumaketanga okuthengisa aseNovosibirsk namadolobha ayo esathelayithi.
Isici esihlukile seGiganta Gardens LLC yindawo ehlelwe kahle lapho kubusa khona ukuhleleka okuhlukile. Umuntu uthola umbono wokuthi zonke izinqubo ezisebenzayo epulazini zilungiswe ngokuphelele futhi konke kuhamba ngokohlelo oluhlelelwe isikhathi eside.
Ensimini yedolobhana lasePriobsky, ubelokhu etshala imifino endaweni evulekile nevaliwe iminyaka engaphezu kwengu-20 I-Priobskoye CJSC... Umqondisi webhizinisi nguViktor Petrovich Becker.
Amathani angaphezu kwezigidi eziyisihlanu emifino emisha akhiqizwa lapha minyaka yonke. Imikhiqizo esekhulile ithengiselwa abathengi abathengisa ngokugcwele, inikezwa izinhlangano zikahulumeni, kanti eminye inikezwa ezitolo zamaketanga okuthengisa eNovosibirsk.
Ipulazi linezinkambu zalo eziniselwa ngenkasa, izindlu zokugcina izithombo, imishini yezolimo yesimanje, izimoto eziningi, izindawo zokugcina izimpahla, izitolo zemifino, ezifakwe imishini yesimanje yesimo sezulu. Konke lokhu kunikeza umjikelezo wokukhiqiza ogcwele: ukukhula, ukugcina, ukuthunyelwa kanye nokulethwa kwemikhiqizo.
I-Priobskoye CJSC inikezwe amadiploma nezindondo eziningi emibonisweni, emincintiswaneni nasemibukisweni. Le nkampani yenza yonke imizamo yokuthuthukisa ukusebenza kahle kwabasebenzi kanye nokuncintisana emakethe, isebenza ukukhulisa amanani wokukhiqiza ukuhlangabezana nezidingo ezikhula njalo zomphakathi zemikhiqizo emisha yemifino. Umsebenzi oyinhloko ukufakazela ukuzethemba komthengi.
Indaba yamabhizinisi akhulisa amazambane esifundeni saseNovosibirsk ingaqhubeka, kepha, ngeshwa, abanye abalimi balahlekelwa intshisekelo ngesiko futhi banciphisa ukukhiqizwa kwamazambane.
Isibonelo, ku I-KFH "Leonidov" kulo nyaka, indawo yokulima yehliswa isuka kumahektha angama-200 yaya kumahektha angama-120. Izizathu intengo ephansi yemikhiqizo yezinkathi ezithile zonyaka nobunzima bokumaketha isivuno. Kepha kunethemba lokuthi isimo esikhona njengamanje yinto yesikhashana, futhi ulwazi olutholwe yibhizinisi lusazodingeka.
Abalimi bamazambane baseSiberia balindele ukuthi unyaka wezi-2021 ube yindawo yokuguqula isifunda, kanti amazambane azophinde abe yisilimo esinenzuzo enkulu. Lokhu okulindelwe kuhlobene kakhulu nokwakhiwa nokwethulwa kwesitshalo samazambane sikaPepsiCo. Ukucubungula kufanele kusize imboni yamazambane ukuze iphile.
Tags: 2020 No. 3Amapulazi amazambaneIsifunda saseNovosibirsk
Ukuvunwa kwamazambane kuyaqhubeka esifundeni saseKostroma
Umagazini i-Potato System ungumhlanganyeli wombukiso we-AGROSALON!